भिजाएको कपडालाई फ्रिजमा राखेर हेर्नुहोस् ! फाईदै-फाईदा !!
Fri, May 24, 2019 at 1:04am
सुन्दा अपत्यारीलो लाग्ने काम सायद कसैले गरेको छैन् होल । कपडा भिजाएर फ्रिजमा राख्ने । तर यसको वास्तविकता हामीले सोचेभन्दा धेरै भिन्न रहेको छ । यसरी कपडा भिजाएर फ्रिजमा राख्नु राम्रो हो । यसो गर्नाले धेरै फाइदा हुन्छ ।
भिजाएको कपडा फ्रिजमा राखेर गरिएको एक अनुसन्धानले कपडाको आयु बढ्ने देखिएको छ । यसरी कपडालाई भिजाएर फ्रिजमा राख्दा कपडामा भएका रेशाहरु बलियो हुने र लामो समयसम्म टिक्ने देखिएको छ ।
यसो गर्नाले कपडाको रंग उड्ने समस्या समेत कम हुन्छ र भुवा निस्कदैन् । माइनस ७ डिग्री सेल्सियसमा सबै ब्याक्टेरियाहरु मर्ने हुँदा कपडालाई प्लास्टिकको झोलामा राखेर फ्रिजमा राख्दा कपडामा भएको दुर्गन्ध हटेर जान्छ ।
हुँदाहुँदा यस्तो पनि ! फेसबुकमा लभ परेर होटल बोलाएकी महिला आफ्नै श्रीमती परेपछि…
सिन्धुपाल्चोकमा विद्यार्थीको कपाल शिक्षकले काट्ने यस्तो चलन
गर्मीले सताएपछि टोयोटा कारलाई गोबरले लिपियो, धेरैको जिज्ञाशा यस्तो !
ठूलो खुलासा : चीनमा यसरी यौनदासी बनाइन्छन् उत्तर कोरियाली महिला
मन्तव्य राख्ने क्रममा लालबहादुरको निधन, यस्तो भन्छन् प्रधानाध्यापक !
फोनबाट माया पिरती ! प्रेम विवाहमा धोका खाएपछि न्याय खोज्दै गङ्गा
१ सय १७ वर्षीया बाटुलीलाई मासिक १० हजार, 'विश्व कीर्तिमान'मा नाम लेखाउन पहल
यहाँ मस्त सुतेको पनि तलब पाइन्छ !
त्रिशूली ३ बी सवस्टेशन निर्माणको अवरोध हट्यो, आयोजनास्थलमा प्रहरी परिचालन
संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली देश मानिएको अमेरिका मुसाको अगाडि निरीह !
'नेपालमै हो छुट ?' इञ्जिनीयरको नै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली
मानिसको पेटबाट ११६ वटा फलामका किला निस्किएपछि डाक्टर नै तीनछक्क !
शिक्षक, विद्यार्थी यार्सागुम्बा टिप्न जाने , २ महीनासम्म विद्यालय बन्द
‘स्टिङ अपरेशन’ गर्न दिएको घुस रकम नै हराएपछि...
विषालु सर्प गोमनले टोक्दा दुधालु गाईको एक छिनमै मृत्यु
काठमाडौंमा हुने ‘च्याम्पियनसिप रेस्लिङ’ का लागि विश्वविख्यात रेस्लरहरु नेपाल आउँदै
चितवनमा मरेको भनि अन्त्येष्टि गर्नै लाग्दा शिशुले एक्कासि सास फेरेपछि…
बाँदरले बसिखान नदिएपछि गाउँका बासिन्दा विस्थापित
यी हुन् भारतीय अर्बपतिका हट छोरी, यस्तो छ विलासी जिवनशैली !
अब 'airport'मा ३ मिनेटभन्दा बढी समय 'kiss' गर्न नपाइने
सांसद छिर्ने भवन परिसरमा भुस्याहा कुकुर छिरेपछि ... !
अब आफ्नो बच्चा पढाउन पैसा हैन फोहोर बुझाए हुन्छ !
नेपालमा पहिलोपटक 'bird flu'बाट मानिसको मृत्यु
विश्व कै अचम्मको होटल जो बनेको छ आलुबाट ! एक रातकै लाग्छ यति धेरै रकम !
युगान्डाकी १ महिला जसले ३९ वर्षमा जन्माइन ४४ सन्तान ! (भिडियो)
नेपालमा यतीको पाइला भेटेको भारतीय सेनाको दाबी
भासिँदैछ जकार्ता : इन्डोनेशियाको राजधानी अन्यत्रै सारिने !
अष्ट्रेलियन सरकारको २० लाख जंगली विराला मार्ने योजना
आमाको पेटभित्र जुम्ल्याहा शिशुको हानाहान, भिडियो भयो भाइरल
चट्याङबाट बच्न रक्सी छर्केर घरभित्र पस्छन् गाउँका बासिन्दा !